Hot entwasahlobo usuku ngo-1926 ngesikhathi Paris eceleni komgwaqo owayemi mnumzane abagqoke kahle, futhi bebambe ngokusebenzisa izincwadi ingilazi embukisweni Umbukiso. Kuye kwafika nomunye esiyingcweti, futhi kancane wamemeza kuye, limbiza. Umthandi izincwadi emhlabeni, bese isibhamu kwamenyezwa ukuthi: bona ngokomzwelo kuze kube sigubhu isibhamu akenzanga revolution ephelele. Wagijimela Amaphoyisa, bona ngokuqapha wasondela umbulali, futhi ngesizotha wabanika izikhali futhi yazinikela.
Ngakho ngo-1926, 26 Meyi, yaphela Biography Petlyura Simon Vasil'evich omunye fighters edume kunazo sokuzibusa Ukrainian, izithunjwa futhi wakholisa anti-Semite. URehobowamu wayeneminyaka engamashumi amane nesikhombisa kuphela ubudala, kodwa yena, wayebé abadumile, futhi abe yisisulu ukuzingela wama-KGB Soviet. Bawa kanye izinsolo kuqala. uphenyo olwenziwa ngokucophelela waqinisekisa ukuba yiqiniso kwale ndaba. kwamazwi kaSamuweli Shvartsbada (igama Bhalobhasha), owathi izenzo zabo kuba ukuziphindiselela wabulala Petliurists umndeni Ukraine, eyayihlanganisa abantu nanhlanu, futhi yena akayena ejenti kwamaBolshevik, kodwa umJuda elula.
Amajaji ukhululiwe Shvartsbada bebuqaphela ngokugcwele ukuthi ukufa izihlobo zakhe ukusola Petlyura Simon Vasil'evich. Umlando unikezwe i-inkantolo yasichitha konke ukungabaza ukuthi isisulu okuqalwe eziningi kohlanga okwenziwa maqondana kokubili abangamaJuda nabangama-Russian kanye labantu.
May 17, 1879 emkhayeni ompofu nezingane eziningi Poltava umfana ozelwe, owayebizwa christened Simon. Uyise wayengumGreki umshayeli cab, insizwa bafundile kuphela esikoleni sobufundisi, okuyinto benza. yakheke Imibono ngalokho kufanele kube ikusasa Ukraine kakhulu kumuntu osemusha ngaphakathi Lapho ngishumayela endaweni ezungeze isikhungo, lapho ngo-1900 yaba ilungu le Revolutionary Ukrainian Party, inhlangano yezombangazwe lokukholisa ubuzwe. nensizwa izinto zokuzilibazisa zazingafani, bekatsandza umculo nokufunda Marx. Ngaleyo minyaka, phakathi kwabangane bakhe kwakunjalo ngamaJuda amaningi, okuyindawo kungenziwa waphetha ngokuthi i anti-Semite ngenxa yezakhi zezombusazwe.
Phakathi imibhikisho ebihambisana nodlame, kanye ukuchwensa of sabefundisi waxoshwa Simon (1901), futhi waboshwa ngemva kweminyaka emibili. Hhayi fighter balangazelela inkululeko Ukraine, kodwa inhliziyo yayibukhuni behlupheka emigodini, esikhathini esingangonyaka kamuva, lapho ungaphandle ngebheyili, okwathi ngemva kwalokho wajoyina inkonzo wamabhuku ezimali inkampani yomshuwalense "Russia", ungakhohlwa party umsebenzi omningi ngomshoshaphansi. Ngo-1914, alibheke abakutholanga eya phambili, isevisi kwathiwa umthwalo, wakhonza njengephayona zamupolnomochennogo Union Zemstvos.
Umlando Active zezombusazwe zalo Petliura yathoma khona ngemva Februwari revolution. Ngokushesha waba inhloko yalawa Jikelele Military Committee Central Rada. Isimo sezombusazwe kwenza ukuba ngimemezele sovereignty of Ukraine, okwakubekelwa ngokushesha kwenziwe. Ngemva Okthoba revolution amabutho republic azimele abangu kabusha. ezinhlwini Military ukuzwakala iculo nganoma yisiphi ubuzwe Patriot: "Ukubhema Ataman", "ataman", "Cornet" ...
ibutho Ukraine kufanele ukhulume Ukraine futhi Russian - shiya "Nenko", lawa kwakungamadodana oda kuqala. Nokho, Independence, kwaba inkohliso ezingaphezu kuka Okuyınqo, ngemuva kokuphothulwa the Brest ukuthula ungqongqoshe impi langena ukuhanjiswa German Jikelele Abasebenzi, kanye nezinceku zika sinezhupannikov ukuhlukana kwakhe. ' " Maduze nje amaJalimane uncamela ukubhekana ne Hetman Skoropadsky. Biography Petlura kule nkathi siqukethe okuqhubekayo ukusonta zijike ngokushesha. Uthembisa abasebenzi embonini, umhlaba ukuze abalimi, Ukraine Ukraine futhi akucaci ukuthi namaJalimane French.
Kuwo wonke la ezilingayo inikeza enengqondo kunazo kwadingeka ithuba yokuphangwa kungabi ndaba zalutho. Yiqiniso, Ukraine ayenqatshelwe Ukucelwa impahla, kodwa le lokudlela ngempela ukwenza ukuthi ngubani abangamaJuda nokuthi ubani "Moskal" ...
Ngo-1919, isimo ngempela udidekile e-Ukraine. Reds walwa mhlophe, khona-oMfelandawonye wathumela amasosha, lo nabasePoland, futhi, Akazange atatazele, Nestor Makhno elawulwa indawo enkulu futhi Petliurists banamathela zonke owavuma ukwenza ubuhlobo yesikhashana nabo. Olubomvu Denikin kusukela usizo olunjalo kwenqatshiwe, futhi namaJalimane French yafuna liphezulu kakhulu intengo umkhulumeli.
Political Biography Petlyura yaphela ngo-1921. Uma-ke kwakudingekile ukuba othile, bese amaBolshevik, ukudubula kwakhe. Poland, ogama ubuholi uthambekele kakhulu ekufezeni isinqumo ayiswe, kwadingeka ukuba abalekele Hungary ke ase-Austria, futhi ekugcineni ngo-Paris. Lapha UStepan Grave (aka Simon vasilevich Petlyura) ukuhlela umagazini "Trident ', uhlaka lweNhlangano Abashisekeli bezwe lase-Ukraine, izihloko okuyizinto ogcwele wegama" umJuda "nazo zonke izithako zawo.
Lokhu kwaqhubeka iminyaka emibili. Ngo-1926, zonke iphelile. Umngcwabo senzeka ngesikhathi Paris emathuneni de Montparnasse.
Namuhla, ezimele Ukraine Petliura khumbula lingandile kangako kuka Mazepa noma Bandera. Akucaci ukuthi kungani kunjalo, ngoba izindlela wazo zontathu zifana ngakho ...
Baklanov Yakov Petrovich Cossack Ataman: Biography
Le ndawo yomlando Don Cossacks. Map Indawo of the Army Don
Lapho wangcwatshwa Vasily Stalin wayesefa
Inkukhu Tabaka - omunye izitsha athandwa kakhulu
"Maye kusukela Wit": Scene Ukuhlaziywa "Ball endlini Famusov"
Concept - it is a uhlobo oluthile ukucabanga